ॐ ॐ ॐ यस्तो दुर्लभ दाहिने शंख जसले जिवनमा धन, सम्पती र खुसी मिल्ने छ ! कमेन्टमा ॐ लेखी शेयर गर्नुहोस् ! – Namaste Dainik
May 14, 2020 NamastedainikLeaveaComment on ॐ ॐ ॐ यस्तो दुर्लभ दाहिने शंख जसले जिवनमा धन, सम्पती र खुसी मिल्ने छ ! कमेन्टमा ॐ लेखी शेयर गर्नुहोस् !
काठमाडौं । तपाई भाग्यमा कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ भने भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ दाहिने शंखलाई दर्शन गरि यसको महत्व जानी शेयर गर्नुहोला जिवनमा धन,सम्पती र खुसी पाउँनुहुनेछ ।
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो यसका बारेमा त सबैंलाई जनकारी छ । जीउँदो शङ्ख समुद्रमा पाइने जलचरले बनाएको खबटा हो,यो धेरै जसो वामावर्त अथवा दक्षिणावर्तमा बनेको हुन्छ। प्राचीनकालदेखि नै विभिन्न प्रयोजनमा ल्याइने शंख एक प्रकारको समुद्री चिप्लेकिराको कडा आवरण हो ।
धार्मिक अवसर एवम् सांस्कृतिक कार्यमा यसलाई फूकेर बजाउन पनि सकिन्छ। तसर्थ यसलाई एक बाजाका रूपमा पनि लिइन्छ। नेपाल,भारत,श्रीलंका,बंगलादेश आदि मुलुकमा यसको यसरी प्रयोग भएको पाइन्छ ।
शंख विभिन्न किसिमका हुन्छन्,तीमध्ये दाहिना शंख बहुमूल्य मानिन्छ, जुन निकै महँगो हुन्छ । लाखौं शंखमा दाहिना शंख एउटा पाइन्छ ।
हिन्दू धर्ममा प्रयोगृसम्पादन गर्नेरामायण,महाभारतमा शंखको महिमा प्रसस्त छ भने हाम्रो समाजमा मंगल कार्यदेखि मृत्युजन्य शोकको घडीमा समेत शंखवादनलाई महत्त्व दिइन्छ । शंख बजाउँदा त्यसको ध्वनिले विभिन्न प्रकारका रोगाणु र विषाणुलाई मार्ने वर्णन ऋग्वेदमा छ । जुन धन प्राप्तको लागि शुभ शंख मानिने गर्छ।
मध्यावर्ति शंख यस अतभुत शंख:धेरै दुर्लभ मानिने गर्छ। यस शंखको मुखको बीचमा खुल्ला भाग रहेको हुन्छ। तपाईको सम्पूर्ण अभिलाषा पुरा गर्न यस शंख उपयोगी रहने गर्छ।मावर्ति शंख यो शंख:प्राय बायाँ हातबाट पकडिइने गरिन्छ।
मोती शंख:यस शंख मानसिक चिन्ता हटाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ भने श्वास प्रश्वास सम्बन्धि समस्याको लागि पनि यस शंख काम आउने विश्वास गरिन्छ। यस शंखलाई जहिले पनि गंगाजलले स्नान गरिने गरिन्छ।
विष्णुशंख:यस शंख पूर्ण सेतो रंगको रहने गर्छ भने जटिल रूपाकृतिको रहने गर्छ। यस शंख भगवान विष्णुको वाहन गरुड़को आकृतिको रुपमा रहने गर्छ। यस शंखलाई धर्म शास्त्रमा“चन्द्र शंख”को रुपमा पनि वर्णन गरिएको छ। पवित्र,ईश्वरीय,दुर्लभ चमत्कारिक रुपमा जसको पनि बाधा,दुख दुर गराउन मद्दत यस शंखले गर्ने गर्छ।
हेर्दा-हेर्दै कोब्राको टाउकोमा सुनौलो रंगको (मणी) प्रकाश चम्किन थाले पछि भिडियो हेर्नुहोस